"ဘယ်" ဦး ဆောင်လမ်းပြပိတ်ဖို့ရန်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သလဲ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 21, 2011 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 26, 2011 Douglas Karr
ကျွန်တော်ဟာစက်မှုလုပ်ငန်းဖိုရမ်တစ်ခုမှာစာဖတ်နေတုန်း immediately ည့်သည်က“ ဘယ်ဟာကဘယ်လိုင်းကချက်ချင်းမပိတ်နိုင်ခဲ့တာလဲ? ဤအရာသည်အလွန်ထူးခြားသောမေးခွန်းဖြစ်ပြီး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းကဘာလဲ အဆိုပါစာချုပ်တန်ဖိုး? အလားအလာကုမ္ပဏီ၏လူ ဦး ရေအချိုးအစားသို့မဟုတ် firmographics? သူတို့ဟာအလားအလာကောင်းတဲ့အင်တာနက်ဟာနေရာအနှံ့မှာရှိလား။ ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလား၊ အမျိုးသားစီးပွားရေးလား။
အလယ်အလတ်တန်းစားများအကြားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုသင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သလဲ။ လခပေးသောရှာဖွေခြင်းကြော်ငြာသည်ဥပမာခေါင်းစဉ်နှင့် meta ဖော်ပြချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ တစ်ခုကအခြားတစ်ခုထက်ပိုကောင်းသလား။ သင်လုပ်ဆောင်နေသည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီမပြီးမချင်းသင်မသိပါ။ ဒါကအတော်လေးစမ်းသပ်မှုကြာပါသည်။
ထို့အပြင် 1 + 1 သည်တစ်ခါတစ်ရံ3နှင့်အထက်နှင့်ညီမျှသည်ဆိုပါစို့။ သင်မောင်းနှင်သည့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကြော်ငြာကိုသင်လုပ်လိုသည်မှာဘလော့ဂ်တစ်ခုသို့ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုခေါ်ဆိုမှုကို နှိပ်၍ အီးမေးလ်တစ်ခုအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်တွန်းအားပေးသည်။ ထို့နောက်…သင်သည် ၆ လကြာသည့်လှုပ်ရှားမှုကိုအလားအလာရှိအောင်ဆွဲယူပြီး ၃ လအကြာတွင်အလွန်တုံ့ပြန်မှုရနိုင်သည်။ "ဘယ်" အလတ်စားအမှန်တကယ်ကဒီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာလဲ
စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးအလားအလာများသည်လည်းကွဲပြားခြားနားသည် ရည်ရွယ်ချက် အလတ်စား၏အသီးအသီးအမျိုးအစားကိုစားသုံးသည့်အခါ။ ဥပမာအားဖြင့်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုတွင်တွေ့ရှိသောဘလော့ဂ်တစ်ခုသည်အလားအလာရှိသောသိလိုစိတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးပြီး၎င်းကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကြည့်ရှုရန်အတွက်အမှန်တကယ်ဝယ်ရန်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအခါအားလျော်စွာသိမ်းဆည်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ လူမှုမီဒီယာကတဆင့်သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တစ်ခုပါ။ ဘယ်အချိန်မှာ များမှာ ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားလုံးအတွက် Cross-Channel Marketing Implementations ကိုကျင့်သုံးသည်။ တခါတရံကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်မှုနှင့်အခွင့်အာဏာရှိသောမောင်းနှင်သည့် application များကိုတည်ဆောက်သည်။ အခြားအချိန်များတွင်၎င်းတို့သည်ရိုးရှင်းသောမီဒီယာကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်မေးလ်များကိုပင်ညွှန်ပြနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သည်မှာဘတ်ဂျက်တစ်ခုတည်းဖြင့်မှုတ်ထုတ်ခြင်းမပြုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြားခံများအားလုံးကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ထောက်ပံ့ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့အလားအလာရှိတဲ့အခြေအနေကိုဒီကြားခံတွေအကြားအလွန်အမင်းပိုင်းခြားထားတယ် - လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ဗွီဒီယို၊ လူမှုရေး၊ ရှာဖွေရေး၊ ရိုးရာ၊ ပထဝီဝင်၊ အီးမေးလ်၊ ဘလော့ဂ်၊ ကြော်ငြာကြေး၊ စပွန်ဆာ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ သင့်မှာအတွေ့အကြုံအနည်းငယ်ရှိသည့်နေရာတွင်ကျွမ်းကျင်ပြီး၎င်းကိုတစ်ကြိမ်လျှင်အလယ်အလတ်တစ်ခုထဲသို့ထည့်သွင်းပါ။